La Dagaalanka Jahliga | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdijabaar Sh. Axmed — July 8, 2015
La dagaallanka Jahliga. Waxaa tusaale wanaagsan u ah Ololihii Horumarinta Reer Miyiga ee lagu ciribtirayey jahliga oo uu ugu horreeyo wax qoris iyo aqrin la’aanta, taasoo ciribteeda la mahdiyey.
Wali waxaa maalmahaan dambe jiro Soomaali badan oo haysato fursad waxbarasho haba ka mid noqdeen kuwa dalkii iyo dibidaba jooga. Xaqiiqda dunida ayaa ah in UNESCO sheegtay in bulshada dunidda kunool 50% ay yihiin dad aan waxbo qorin waxna aqrinin (illiterate) midaas waxay ku tusinaysaa cadaalad daridda dunidda ka jirto inay sii kordhayso.
Hadaba su’aasha meesha taallo ayaa ah aqoonta adiga miyaa raadsado mise iyada ayaa ku soo raadsato?
Waxaa jiro Soomaali badan oo waxbarashadii jaamacadaha dhameeyay mise aqoon fiican lahaa maantana markii aad fiiriso waxaad ogaanaysaa inaysan wax aqoon la yiraahdo aysan ku jirin. sawabta keentay ayaa la dhihi karaa Soomaalida aqriska wu ku yaryahay, in qofka Soomaaliga waxwalbo lagu shubani karo waxaa keenay maskax yari, waxaa keenay ayaa la is dhihi karaa hubsasho la’aanta, wax aqriska iyo waayo aragnimada dunida ka jirto oo ku yar. Balse waxaas oo dhan maanta waxaa loogu bixi karaa inaad wax barato, haddii aad aheed qof wax baratay maanta bilow inaad dib ugu laabato buugaagtaadii iyo cilimigii loo baahnaa inaad wakhti ku lumiso.
Waxaan hadalkeyga kusoo gabagabaynayaa in hurdada laga wada kaco, maxaa yeelay waxaa na sugaayo dal bur-buray iyo bulsha u baahan in si fiican loo garab qabto. Haddii aad adiga wax u qabani weyso bulshadii aad ka dhalatay cidkale oo wax u qabani karto ma jiraan aan ka ahayn Alle s.wc.c….Illaahay marwalbo wuu na garab taaganyahay haddii aan asiga oo kali aan ka cabsado oo aan iska dayno waxwalbo oo bulshadeena iyo qarankeena dhib u keeni karo.
Qabyaalada in Soomaali baabi’say cidwalbo ma mooga balse wax walbo in laga bixi karo ogaado. Dhib walbo oo dhaca wuxuu leeyahay xal iyo nidaam loo maro siddii loo xalini lahaa. Guusha dalka iyo dadka Soomaalida wuxuu ku jiraa inay wada tashadaan oo iayaga dib uso ogadaan cidda ay yihiin iyo sawabta ay u dhacayaan dhammaan waxyaabahaan oo dhan.
Illahay waxaan ka baryaayaa in wadankena inoo hagaajiyo, asiga ayaa na canfacaayo, dunidda meelwalbo oo aad ka joogto waxaad sharaf leedahay markaad wadankaada nabad iyo burwaaqo ku haysato.
Tags: La Dagaalanka Jahliga
Next post Calaamadaha Lagu Garto Qofka Wax Jecel